साउदिबाट श्रीमानले राति निदाएको बेला फोन गर्दा ‘राती फोन नगर्नु’ भनेको थिए, त्यसपछि उहाले १६ महिना भयो फोन गर्नु भएको छैन ! मेरो फोन पनि उठाउनु हुन्न ! – Complete Nepali News Portal
July 8, 2017	1,450 Views
काठमाडौं, असार २४ – ‘उ बाबा आयो, मेरो बाबा’ बाटोमा झोला बोकेर हिँड्ने लोग्ने मान्छे देख्ना साथ पछिपछि कुदिहाल्छिन नवलपारासीका ज्ञानबहादुरकी कान्छी छोरी । ज्ञानबहादुर साउदी जाँदा गर्भमै भएकी कान्छी छोरी चार वर्षकी भई सकिन । बुवाको अनुहार नदेखेकी उनले फोनमा बुवासँग बोल्न थालेपछि बुवा आज आउनुहुन्छ भन्दै बाटोमा मान्छे देख्ना साथ बुवा भन्दै पछि नलागेको दिन छैन् ।
जो देखेपनि बाबा भन्दै पछि लाग्ने नातिनीलाई फकाउन गाह्रो भएको छ ज्ञानबहादुरकी आमा निरमाया दराइलाई । ‘त्यो तिम्रो बाबा होइन, तिम्रो बाबा त भोलि आउँछ,’ निरमायाले यसो भन्दा उनी डाको छाडेर रुन्छिन् तर पत्याउदिनन् । रुँदारुँदै निदाउँछिन् । बिहान भएपछि फेरि त्यस्तै गर्न थाल्छिन् ।
निरमायाले नातिनीलाई ‘तिम्रो बुवा भोलि आउँछ’ भन्दै कुराएको दुई वर्ष हुन लाग्यो । नातिनीलाई दिनैपिच्छे दिने झुठो आश्वासनले निरमायाको आफ्नै मन भने कुँडिरहन्छ ।
१६ महिना अघि सम्म त ज्ञानबहादुरले साउदीबाट दिन कै फोन गर्थे । फोन आउन साथ कान्छी छोरी सँधै बोल्थिन् । ‘बाबा मलाई पापा’ भनेर फोनमा बोल्ने बानी परेकी नातिनी हिजोआज पनि मोबाइल पाउना साथ कानमा लगाएर बाबालाई आफ्ना कुरा भन्छिन् । तर उनका कुरा सुन्न फोनमा बाबा हुँदैनन् ।
‘उसको बाउले फोनमा बोल्दा नाना र पापा ल्याउँछु है बाबाले भन्थ्यो । छोरीले त्यहि सम्झेर हैरान छ ।’ निरमायाले नातिनीका क्रियाकलाप सुनाउनुभयो । ‘उसले त छोरी भुल्यो जस्तो छ, छोरीले सम्झाएर सबैलाई रुवाउँछे,’ निरमायाले चित्त दुखाउनुभयो ।
उहाँको मन झस्किन्छ । ‘कतै छोरालाई केहि त भएन ?’ ‘एक मनले सोच्छ बुहारीलाई पो सताएको हो कि ।’ निरमायाले आशाका साथ भन्नुभयो ।
आमालाई मात्र हैन श्रीमती शान्ति दराईलाई पनि श्रीमान् रिसाएर घरमा फोन नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ । ‘उनले म निदाएको बेला राति फोन गरेका थिए त्यसैले मैले राति फोन नगर्नु भनेको थें, शान्तिले श्रीमान्सँग भएको कुराकानी सुनाउनुभयो ।
शान्तिले राती फोन नगर्नु भन्दा ‘अब कहिल्यै गर्दिन भनेर’ ज्ञानबहादुर रिसाएका पनि थिए । निरमायाले पनि निद्राको सुरमा उठेको रिसै रिसमा ‘म पनि गर्दिन’ भनेर जवाफ दिनुभएको थियो । शान्तिले बिहान उठ्ने बित्तिकै ज्ञानबहादुरको नम्बरमा फोन लागउनुभयो तर उठेन ।
त्यसको केही समयपछि फोन उठेपनि अरबी बोल्ने मान्छेले फोन उठायो । ज्ञाबहादुरका जेठा दाइ साउदी मै बसेर फर्किएकाले अरबीमै उसँग भाइको बारेमा सोध्नुभयो । तर उसले ज्ञानबहादुरलाई चिन्दिन भन्ने जवाफ दिए । शान्ति र निरमायाले ज्ञानबहादुरको नम्बरमा धेरै पटक फोन लगाउनु भयो । तर अहिलेसम्म फोन लागेको छैन् ।
निद्राको बेला बोलेको दुई शब्दले श्रीमान् यसरी रिसाउलान भनेर शान्तिले सोच्नुभएको थिएन । फेरि ज्ञानबहादुरले शान्तिलाई ठूलो बचनमा कहिल्यै गाली गरेका पनि थिएनन् । आफूले जिस्केर भनेको कुरामा श्रीमान् किन त्यति सारो रिसाए शान्तिले बुझ्नुभएको छैन् ।
त्यसैले शान्तिलाई यी सबैकुरा सपना झैं लाग्छ । झन छोरीले बुवा आज आउँछन् भनेर दिनकै गर्ने क्रियाकलापले शान्तिलाई श्रीमान् साँच्चै आएनन् भने आफू र छोरीहरुको चित्त कसरी बुझाउने होला भन्ने कुरा सताइरहन्छ ।
कान्छी छोरीले मात्रै होइन ज्ञाबहादुरकी जेठी छोरी पनि बुवा आज आउँछन भन्दै बहिनीकै कुरामा सही थप्छिन् । शान्तिलाई आफ्नो एक बचनले छोरीहरुले बुवाको मुख हेर्न धोको नै नपुग्ने हो की भन्ने लाग्न थालेको छ ।
पहिले पहिले दुईचार दिनमा फोन गरिहाल्छन नी भन्ने लागेपनि शान्तिलाई यति लामो समयसम्म फोन नगर्दा श्रीमान् कतै समस्यामा पो परेकी भन्ने लाग्न थालेको छ ।
सुचना केन्द्रले ज्ञानबहादुरको खोजीका लागि काठमाडौंको अनामनगरमा रहेको प्रवासी नेपाली समन्वय समिती (पिएनसिसी) मा पठाएको थियो । पिएनसिसीले उनको खोजी गरेपनि अहिलेसम्म कुनै जानकारी पत्ता नलागेको समितीकी कार्यक्रम अधिकृत शान्ति सिंहले बताउनुभयो । ‘बुहारीकै कुराले रिसाएको भए छोरीहरुका लागि भएनी घर आउ बाबु,’ निरमायाले छोरालाई घर फर्कन अनुरोध गर्नुभयो । – उज्यालोअनलाइनबाट